Labada qof ee isbitaalka Spindleruv Mlyn - PetrPikora.com
PetrPikora.com on Janaayo 1, 2018
Spindleruv Mlyn (Jarmalka Spindlermühle) waa dalxiis iyo dalxiis oo muhiim ah Giant Mountains. Magaaladda Špindlerův Mlin waxay ku dhawaad ​​deggan tahay 1200 (2006 waxay ku dhowdahay 1400) iyo 7690,91 ha. Jidka II / 295 wuxuu ku dhammaaday bartamaha magaalada, waxaana ku xiga waddo buur ah oo ku taala Špindlerova bouda. Elbe Baraf waa biyo kayd ah oo ku yaalla xadka sare ee webiga Labe, oo ku yaal koonfurta kore ee Spindleruv Mlyn. Waxaa loo dhisay sidii ilaalinta daadadka ee 1910 - 1916. Waa marxaladda ugu weyn ee nidaamka biyaha-biyaha ee Elbe, kaas oo qabta inta badan barafka barafka ee qaybta dhexe ee Buuraleyda Giant.
In Jarmal, magaalada oo hore loo odhan Spindlermühle Spindlerových by qoyska kuwaas oo ay leedahay tuulada dhagax. Hase yeeshee, ka hor, ayaa tuulada markasta loo magacaabay Saint Peter (maanta qaybta magaalada). qoreen in Spindleruv Mlyn - Laakiin in codsiga fasax dhismaha kaniisadda, soo diray by ashtakooday boqorka, waxaa la saxiixyada sidoo kale muujinaya ahaa. Codsigan waxaa sameeyey muwaadiniinta oo ka mid ah millatari Warshadahan. Oo tan iyo markii ay la mid yihiin magacyada degmooyinka ee wadamada ku hadla-German waa si joogto ah, waxaa jiray qalad iyo dib u soo laabtay fasax si ay u dhisaan kaniisad ku taal tuulada Spindleruv Mlyn. Muwaadiniintu waxay door bidaan in ay magacawaan tuulada si ay u dhisaan. Diridda codsi cusub la qaadi karin sida uu aflagaado xujo isku hallayn karo iyo kiniisadda ayaa hubaal ay noqon lahaayeen ma aysan dooneynin.
Rikoorka ugu da'da nool tan iyo bilowgii magaalada waa ka 16 hore. Qarnigii, marka dhowr guryo noqday meel ay magan galaan macdan qodayaasha shaqeeya ku daqiijin jireen steel u dhow, oo baaraandegi iron ore. Inta u dhaxaysa 1516-1521 Czech King Louis Jagiello loo ogol yahay in ay macdan qodayaasha kama dambaynta ah ee lacagta ah ee meeltobnaadyadii, iyo gargaarka. Macdanta ore lacag ah, copper iyo arsenic jiitay Christopher ka Gendorf ugu danbeyn helay dubaan Vrchlabi oo door weyn ka qaata in ay xaqiiqda ah in ay Vrchlabi sano 1533 dalacsiiyay magaalada sare. Mid ka mid ah boqol sano ka dib, in 1621 xitaa uu u safray Prague ka St. Peter xamuul oo naxaas ah iyo lacag ku saabsan dahab 10 000. In 17. macdanta qarnigii kala gooyey by Years War ka soddon. Miinooyinka ka dib gacmaha isku dayay in la soo celiyo macdanta bedelay, laakiin aan micne lahayn. isku day Recent ee dib u soo celinta waxaa taariikhaysan in hore 20 ah. qarnigii.
Magaaladu waa mid ka mid ah xarumaha ugu caansan uguna badan ee isboortiga jiilaalka ee Jamhuuriyadda Czech. Awoodda sariirta waxay ku dhowdahay 10 kun sariirood. Spindleruv Mlyn waxay leedahay xaalado ku habboon ciyaaraha jiilaalka. Wadooyinka xiga iyo waddooyinka wadada kore waxay ku shaqeynayaan bilaha 5 ee sanadka. Dhaqdhaqaaqyo qibrad leh oo qibrad leh oo noocyo kala duwan oo adag ayaa ku jira dhererka wadarta 25 km. Wadarta dayactirada 14 iyo leylayaasha waxay bixiyaan 17 500 yar yar oo leh saacad gaadiid ah. Iyadoo mid ka mid ski pass barafka karaan in ka badan 25 km labisan laylan ee 4 jiga ski kala duwan (St. Peter, Medvedin Upper Mísečky Elbe). Meelaha barafka badanka ah waxaa lagu daboolaa daboolka barafka hoose.
Špindlerův Mlýn waxay bixisaa jimicsi badan xilliga xagaaga. Bilaha xagaaga, waxaa jira xaalado fiican oo loogu talagalay socodka baaskiil wadista. In Spindleruv Mlyn waxaa sidoo kale jira Aquapark.
Spindleruv Mlyn waa isgoysyada wadooyinka socodka. Ku dhowaad waxaad booqan kartaa cirifka socodka ee Špindlerův bouda, burburinta qoryaha Petrovy iyo kuwo kale. Hareeraha Špindlerův Mlin waxaa laga heli karaa wadooyinka dalxiiska ee Horní Mísečky, guga Elbe, Snowpile iyo Labská bouda. Koonfur-bari, raad-raacda waxay u horseedaa Výrovka ama Friesova bouda iyo Na Rozanceí. Laga soo bilaabo Špindlerův Mlýn waxaa jira jidka tooska ah ee Sněžka, qiyaastii qiyaasta 10.
Špindlerův Mlýn wuxuu ku yaalaa xadka sare ee 575 - 1555 mv Giant Mountains. Qeybta ugu sareysa ee tuulada waa Luční hora - buur labaad ee ugu sareeya ee jamacadda Czech. Waxay ku taalaa isku xirka Elbe River iyo Svatopetrský Stream (oo sidoo kale loo yaqaan Dolský potok).
biyo parktamashleqiimahadronedronemootooyinka buurtakvadroptéraLabe xireenkaTariinskiingphantomphantom 3phantom 4dalcadahabaasŠpindlSpindleruv Mlynhoyga